ပရီဘိုင်အိုတစ် အမျှင်ဓာတ်များအကြောင်း – Similac
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှစ၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် မိမိ၏ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပေးခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး ကလေးများ အသက်ကြီးလာသည်အထိ အတူတူရှိပေးနိုင်သည်။ မိခင်၏ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေမှ မိမိကလေး၏ ကျောင်းကိစ္စများ၊ မိမိကလေးနှင့် သူငယ်ချင်းများ အတူတူစုအိပ်ခြင်းတို့ကို စီစဉ်ပေးနိုင်ပြီး မိသားစုဘဝ ပိုပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျန်းမာသော အူလမ်းကြောင်းနှင့်စတင်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစာလမ်းကြောင်းကို ပရီဘိုင်အော့တစ်အမျှင်ဓာတ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာစေသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို အလုပ်လုပ်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး အာဟာရများကိုလည်း ပိုမိုစုပ်ယူစေနိုင်ပါသည်။
အူလမ်းကြောင်းအကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားအစုအဖွဲ့ဆိုတာ ဘာလဲ။ ။
အူလမ်းကြောင်းအကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားအစုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ အစာလမ်းကြောင်းတွင် ထရီလီယံပေါင်းများစွာသော အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားလေးများ ပါဝင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုအစုအဖွဲ့သည် ဇီဝဖြစ်စဉ်များ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အစာချေဖျက်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအား စနစ်တို့အတွက် အရေးပါသည်။ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားအစုအဖွဲ့သည် လူသားများ မွေးဖွားစဉ် အချိန်ကတည်းက ပါလာသော မျိုးရိုးဗီဇများနှင့် မတူပဲ လူနေမှုစနစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အစားသောက်များအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲများဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအစုအဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို မပေးနိုင်ပါက မညီမျှမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အခြားနေရာများမှ အာဟာရဓာတ်များကို ယူသုံးနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို ရောင်ယမ်းစေနိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားကိုလည်း ကျဆင်းစေနိုင်သည်။2
ပရီဘိုင်အိုတစ် အမျှင်ဓာတ် (scFOS၊ ဖူကိုဆိုင်လက်တိုစ့်၊ အော်လီဂိုဆက်ခရိုက်) ဆိုသည်မှာ ကာဘိုဟိုက်ဒရိက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အပင်မှထုတ်လုပ်ထားသော အစားအစာများတွင် သဘာဝအတိုင်းတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်စရာ များစွာရှိပါသည်။ အာရှဟင်းပွဲများတွင် အများအပြားပါဝင်လေ့ရှိသော ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပင်လယ်ရေညှိ၊ ပဲပိစပ်၊ ငှက်ပျောသီးနှင့် ပန်းသီးတို့သည် ပရီဘိုင်အိုတစ်အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအစားအစာများကို သဘာဝနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ပုံစံအဖြစ် စားသုံးခြင်းသည် အမျှင်ဓာတ်နှင့် အခြား အာဟာရဓာတ်များပိုပြီးရရှိစေနိုင်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့် အသီးဖတ်လေးများပါသော အသီးဖျော်ရည်သည် ကျေညက်အောင်ဖျော်ထားသော အသီးဖျော်ရည်ထက် အမျှင်ဓာတ်ပိုကြွယ်ဝသည်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ များများစားပါက ရေကို လည်း များများသောက်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျှင်ဓာတ်သည် ရေကို စုပ်ယူပြီး ဝမ်းကို မာစေသောကြောင့် ဝမ်းမှန်ပြီး ဝမ်းသွားရလွယ်ကူစေရန် ရေမျာများသောက်ပေးရမည်။ 1, 3
သတိထားရမည့် အခြား အာဟာရဓာတ်များ
အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားသုံးခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးမှာ ထို အစားအစာများသည် အသင့်စား စားသောက်ကုန်များနှင့် မတူပဲသဘာဝအတိုင်း စားသုံးပါက အာဟာရဓာတ်များကို ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ မိခင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် သတိထားရမည့် အခြားအာဟာရများမှာ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကယ်လ်ဆီယမ် စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေရန် ဗီတာမင် ဒီ၊ သွေးနီဥ အားကောင်းစေရန်နှင့် နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းစေရန် ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ ခန္ဓာကိုယ် ဆဲလ်များကို ကာကွယ်ပေးမည့် အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေရန်တို့အတွက် ဇင့်နှင့် ဗီတာမင် စီဓာတ်တို့ဖြစ်ပါသည်။1, 4
မိမိကလေးငယ်အတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသော်လည်း မိမိ၏အာဟာရဓာတ်ကို သေခြာဂရုမစိုက်နိုင်သည့် မိခင်များအတွက် မည်သို့အဖြေရှာသင့်သနည်း။ ကျန်းမာစေသည့် အစားအစာများကို စားသော်လည်း အာဟာရဓာတ်တစ်ခုခုကို လိုအပ်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ထို့အပြင် မိခင်များသည် အမျှင်ဓာတ်နှင့် အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေရန် အချိန်လိုသည့်အတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ စားခြင်းဖြင့် ပရီဘိုင်အော့တစ်နှင့် အခြား လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Similac Mum သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက် သိပ္ပံနည်းကျ ဖော်စပ်ထားခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အကျွံတက်ခြင်း မရှိစေပဲ လိုအပ်သော အာဟာဓာတ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ခိုင်မာသော အာဟာရအခြေခံရှိထားခြင်းသည် သင်နှင့် သင့်ကလေး၏ အနာဂတ်ကို ပျော်ရွှင်ကျန်းမာဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ Similac Mum ကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ပါက Similac Myanmar website တွင် လာရောက်စာရင်းသွင်းပြီး နမူနာများ ရယူနိုင်ပါသည်။ .4, 5
Huynh DTT et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 May 7: 1-9